Kabinetra lamba fandroana fandroana
Home / Blog / Ao amin'ny efitrano fandroana Japoney, ny kabinetra lamba famaohana dia manify hatramin'ny 10 santimetatra, mitahiry tsara
2021 / 01 / 16 FisokajianaBlog 6590 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-15
Tsy dia lehibe ny faritra fandroana, ahoana ny fanaovana fitehirizana no mitombina kokoa rehefa manaingo? Te hametraka kabinetra ary manahy momba ny fibodoana faritra iray. Fa ho an'ireo tavoahangy sy siny ary lamba famaohana ireo, aiza no hametrahana azy ireo?
Ny zavatra tsara dia manana namana nianatra tany Japon aho roa taona lasa izay, nilaza tamiko izy fa io teboka io dia azo resahina tanteraka amin'ny famolavolana trano fidiovana ao amin'ny fianakaviana Japoney. Mametaka kabinetra lamba manify matevina 10cm, ny sosona ambony sy ambany amin'ny fitehirizana multi-functional, matanjaka be ny fampiharana!
Fa maninona ny trano fandroana Japoney no toy izao famolavolana izao?
▼Aza mibodo faritra mety amin'ny efitrano fidiovana kely
Kabinetra lamba famaohana toy izany, 10 sentimetatra fotsiny ny halalin'ny ankapobeny. Na tafiditra ao anaty rindrina io, na rindrina misokatra, dia tsy hisy fiatraikany amin'ny hetsika mahazatra ao amin'ny efitrano fidiovana!
▼Fandraisana fitehirizana mahery vaika
Kabinetra manify toy izany, tsy olana ny fitahirizana lamba famaohana am-polony! Sarona fitehirizana ambony sy afovoany ary ambany. Ny afovoan'ny varavaran'ny kabinetra dia ampiasaina hanaovana tahiry mihidy, ny tampony dia ampiasaina hanaovana partitions. Ity manaraka ity dia azo aforitra mivantana ho varavaran'ny kabinetra talantalana, ampiasaina hametrahana akanjo miova. Ary ny ambany dia bara famaohana mihodina, tsy misy lavarangana. Ny servieta mando dia azo soloina mivantana amin'ity kabine lamba famaohana ity, hendry toy inona moa!
Azo tehirizina, azo apetraka, azo maina, iza no tsy tia kabinetra azo ampiharina toy izany?
▼Fisarahana maina sy lena
Izany dia noho ny fisehony mitahiry sosona, ny kabinetra dia tsy miakatra mivantana amin'ny tany. Ny toerana famaohana lamba famaohana ambany dia miharo mivantana, noho izany dia tsy misy toerana fatana fandroana tanteraka. Ho an'ny kabinetra fisarahana mando sy maina, ianao koa tsy mila miahiahy momba ny hamandoana sy ny bobongolo, ny androm-piainana lava kokoa.
Ary koa ny toerana misy ny kabinetra lamba famaohana dia azo alamina moramora: apetraka amin'ny sisin'ny fantsakana. Rehefa manasa dia mora aminao ny maka sy mametraka lamba famaohana. Azo apetraka eo amin'ny rindrina amin'ny fandroana koa izy io, ho fanovana akanjo, aza manahy ny ho lena!
Raha vao naheno izay nolazain'ny namako aho dia tsy afaka niandry ny hangataka ilay tompony hody ary hametraka azy indray. Mitsitsia toerana, fitehirizana mafy. Mety tanteraka amin'ny efitrano fidiako kely misy metatra toradroa io, tsy mahagaga raha nidera ny firakotra fandravahana fandroana Japoney ny rehetra. Saingy be loatra ny toerana ianarana, ary farany namaky endrika antsipirihany japoney 3 koa ny namako, nanapa-kevitra ihany koa aho ny handoko ny tranoko araka izany ↓
Andininy voalohany: Mametraha bar grab eo anilan'ny kabine
Ka rehefa mifoha amin'ny fipetrahana lava ao amin'ny trano fidiovana mandritra ny fotoana lava ianao dia afaka manana toerana fanampiana. Indrindra ho an'ireo zokiolona izay manana olana amin'ny fivezivezena. Rehefa misy lalantsara ny sisin'ny kabine dia azo antoka sy mahaolona!
Andininy Faharoa: Manitatra ny fidirana mankany amin'ny sisin'ny kabine
Ampitomboy ny talantalana, ary ahinjiro ny habaka hampitomboana ny fahatsapana fa feno ny efitrano, ampiasaina hametrahana lamba famaohana taratasy, finday. Tsy mety kokoa izany.
Andininy 3: Mametraha tsivalana misy farango eo anilan'ny tototra
Ny nify sy ny vokatra fanadiovana hafa dia ahantona samy hafa. Fisarahana mando sy maina, ahenao ny fiompiana bakteria, fa koa hamoahana ny habaky ny fitoeran-drano fanasana!
Previous :: Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny trano fandroana, dia sarotra ny manasaraka ahy sy ny maina. Next: Delta Kitchen Faucet hevitra: 2021 Buying Guide for Delta Kitchen Faucets